E-Journal: November 2009
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 2:21 PM6comments
လူတွေ မွေးဖွားကြတယ်… သေဆုံးကြတယ်…
တချို့လူတွေက သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ လုပ်ကြတယ်…
တကယ်တမ်း ကိုယ့်ကို လူဘဝထဲရောက်အောင် ခေါ်လာခဲ့တဲ့… ခုမွေးနေ့ ဒီအသက်အရွယ်အထိ ရောက်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘတွေကိုမေ့လျော့နေကြတာများပါတယ်…
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အရင်က မွေးနေ့ရောက်ရင် ဘုရားသွားမယ်… အလှူအတန်းလုပ်မယ်… သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မုန့်စားမယ်….
ကျွန်မရဲ့ အသက် (၂၀) ပြည့်မွေးနေ့မှာ သူက
“ ဒီနေ့မွေးနေ့ဆိုတော့ ဘ နဲ့ မယ့် ကို ကန်တော့ …
ဘုရားမှာ အလှူလုပ်ပြီးရင် ဘနဲ့မယ့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပေါ့ … “ လို့ပြောလာတော့ ကျွန်မ တအံတသြနဲ့သူ့ကို ကြည့်မိပါတယ်…
သူ့ကိုလည်း ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်… ကျွန်မ မေ့လျော့နေတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပေးခဲ့လို့ပါ…
သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျွန်မကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာလည်း ဒီအသက်(၂၀)ပြည့် မွေးနေ့က စလို့ အသက် ၁၀၀ ကျော်တိုင်အောင် ဘနဲ့မယ် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာပါစေ … ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ….
ကျွန်မရဲ့အသက် (၂၀)ပြည့်မွေးနေ့ကစပြီး ကျွန်မမွေးနေ့တိုင်းမှာ ဘုရားကန်တော့ပြီးရင် ဘနဲ့မယ့်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကောင်းမှုတွေ လုပ်ဖြစ်တယ် အလှူအတန်း လုပ်ပေးဖြစ်တယ်… ဘနဲ့မယ် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးဖြစ်တယ်…
ဘနဲ့မယ့်ကို ကန်တော့တဲ့အကျင့် … ဘနဲ့မယ် တို့နဲ့အတူတူ ရှိမနေခဲ့ရင်တောင် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဖုန်းဆက်ပြီး ကန်တော့တဲ့အကျင့် အကျင့်ကောင်း (၁)ခု ရလာတာ ခုထိပါပဲ…
ကျွန်မရဲ့အကျင့်ကောင်းကို မွေးမြူပေးခဲ့တဲ့ သူနဲ့ကျွန်မ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မတွေ့ဖြစ်ကြတာ ကြာပါပြီ…
မနက်ဖြန်မှာကော သူ့ကိုယ်တိုင် ကျွန်မကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ အကျင့်ကောင်းအတိုင်းပဲ သူ့မိဘတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကောင်းမှူတွေလုပ်မှာလား???
ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေလိုပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သောက်စားပျော်ပါးနေမလား???
သူ့မွေးနေ့မှာ သူ့မိဘတွေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာကြပါစေ…
သူကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာပါစေ… လို့ဆုတောင်းဖြစ်မှာပါ….
မယ်က သူ့ဆီက ကော်နက်ရှင် အဆင်မပြေလို့ ကျနော့်ကို တင်ခိုင်းထားတာပါ။ ကျနော်ကလည်း အွန်လိုင်းကို မရောက်ဖြစ်လို့
ခုမှတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ မယ့်သူငယ်ချင်းလေး တယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။
နောက်ကျသွားတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်မယ်ရေ ။ ။ အချိန်လေးတော့ မှီနိုင်ကောင်းသေးတယ်မျှော်လင့်ရင်း တင်လိုက်ပါတယ် ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 7:16 PM3comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် Asterisk
၂၃၊၉၊၈၀ ၊ လောကလယ်သို့
လူငယ်တစ်ယောက် ၊ စတင်ရောက်လျက်
ပေါက်မြောက်အောင်မြင် ၊ လမ်းသစ်ထွင်ကာ
သူနှင်ခရီး ၊ လောကကြီးဝယ်
မညည်းမကြောက် ၊ ပန်းတိုင်ရောက်အောင်
တောက်လျောက်ကြိုးစား ၊ မျိုးဆွေများအတွက်
ငယ်သော်ကသား ၊ ကြီးသော်အားဟု
ငါ၏မောင်လေး ၊ အနေဝေးလည်း
နွေးထွေးရိုသေ ၊ အားပေးဝေလျက်
သရေမညှိုး ၊ မျိုးဂုဏ်တိုးအောင်
သည်ပိုးထမ်းဆောင် ၊ ချစ်သောမောင်လို့
ဟိုစဉ်ကာလ ၊ ငယ်ဘဝမှ
အစပြုလျက် ၊ ညီအတွက်ဆို
မားမတ်ရပ်တည် ၊ မြဲချစ်ကြည်သည်
စံမီအစ်ကို ၊ လူတိုင်းဆိုသား
ထိုယောက်ျားသည် ၊ ငယ်ထွေးညီတွက်
ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို E-Journal မောင်နှမများအား ဝေငှလိုခြင်းဖြစ်ပါသလို... ကျနော့်ဘဝရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား စတင်ထွန်းကားရာ ရေသောက်မြစ်ဟာ ညီလေးကိုချစ်တဲ့အချစ်ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားလိုခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:08 PM 8 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 1:40 PM0comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သဒ္ဓါစံဖတ်ဖို့ မှတ်စုအချို့ 
နေမင်းရှိန်ရှိန် ၊ မွန်းတည့်ချိန်ကျော်ခဲ့ပေါ့
မွန်းလွဲနေအကျမှာ ၊ အပူရှိန်ဟာအားပျော့
စိတ်လက်ဖြောင့်တန်း ၊ မပင်ပန်းစေလို
ဒါနကိုဝေမျှ ၊ သီလကိုစောင့်ထိန်း
အာရုံတွေသိမ်းလွှတ် ၊ တရားတွင်တွင်ရှု
ပုတီးကိုချ ၊ မြေးကိုမရင်း
သောကဒုက္ခ ၊ ဝေမျှခံစား
**၂၇၊၄၊၂၀၀၈(မွေးနေ့အမှတ်တရ) ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ အမေရေးထားတဲ့ (၅၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကဗျာလေးပါ။
E-Journal မှာ သိမ်းထားဖို့စိတ်ကူးရတာနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သလို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အမေတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ဝေမျှခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 7:42 PM 1 comments